Itoobiya oo sheegtay saddex sano kadib Shidaalka degaanka Soma... | Universal Somali TV
Itoobiya oo sheegtay saddex sano kadib Shidaalka degaanka Somalida in la dhoofinaayo
Wasaaradda Macdinta, Shidaalka iyo Saliidda Dabiiciga ee Itoobiya ayaa sheegtay Soo saarista Shidaalka Deegaanka Soomaalida laga helay in lagu soo gabagabeeynaya saddex sano.
Agaasinka waaxda maamulka shatiyada shidaalka ee wasaaradda Qasala Tadese ayaa sheegtay iney jiraan marxalado dhowr ah oo ka horreeya oo uu shidaalka soo saaristiisu marayo inta aan la isticmaalin ka hor.
Waxayna intaa ku dartay "in la qodayo boqollaal ceel oo kale isla-markaana la fulinayo mashaariic waaweyn oo dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah oo fududeynayo shidaalka in muddada looga tala galay dalku uu ku soo saaro."
Sida oo kale deegaanka Soomaalida shidaalka laga helay oo keli ah iyada oo aan lagu ekaaneyn waxaa sida oo kale baarid iyo soo saaridba laga sameeynayaa qaybaha kale ee dalka ee shidaalka laga helay.
Waxayna wasaaradda macdinta Bishi June ee Sanadkan shaaca ka qaadday in keyd shidaal oo aad u badan laga helay Deegaanka Soomaalida ee ku yaallo bariga dalka Itoobiya.
Ilaa iyo hadda waxaa shidaal laga helay shan qaybood oo dalka Itoobiya ka mid ah sida Rift Valley, Abbay, Mekelle, Metema iyo Gambella balse waxaa marki ugu horreysay shidaal laga soo saaray Deegaanka Soomaalida qaybo ka mid ah tijaabadi la sameeyeyna lagu guuleystay.
Kan-xigaDad gaaraya 45 ruux oo ku sumoobay ca...
Kan-horeGudoomiyaha Aqalka Sare iyo Wafdi uu ...
45,296,962 unique visits